Waqtiga Duulimaadka ee Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul oo La Kordhiyey… Qiimaha Duulimaadka Turkiga ayaa Kordhay; nidaamka gaadiidka hawada Faransiis ee marxaladda tijaabo ah "ku milmaan Point" ka iibiyey Turkey. Nidaamku wuu gaabiyey xilliyada duulista. 3 kun ayaa bartilmaameedsatay gaadiidka cirka qaada kun jeer maalin kasta garoonka diyaaradaha Istanbul [More ...]
Sabiha Gökçen'e Kocaelikart Loading Point; Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. , iyada oo la raacayo baahida culus ee muwaadiniinta Sabiha Gokcen Airport ee nidaamka rarka waxaa lasiiyay rakaabka. 7 laga bilaabo Khamiista ilaa Nofembar [More ...]
codsiyada ma yihiin dalal badan oo dunida ku bilaabmaa Turkey! Ka sokow rakaabka leh dhaqdhaqaaqa xadidan ee garoomadayada; mudnaanta duulista ayaa la siin doonaa dhallaanka, uurka iyo rakaabka buka ee u baahan marin deg deg ah! Maamulka Madaarada Gobolka [More ...]
Damaanad-qaadyada Rakaabka ee Mashruucyada BOT Ayaa Dadweynaha Lumiyay Xilli Xilli Million Doolar; Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada ee Gobolka (DHMI) ayaa war qoraal ah ku sheegay in lagu dhisayo mashruucyo lagu wareejinayo wareejinta mashruucyada la siinayo khasaaraha shacabka ee rakaabka oo dammaanad qaadaya 65 milyan oo doolar [More ...]